नागदेवताको मणीलाई दर्शन गरी एक सेयर गर्नुहोस ..ॐ ! – Sapana Sanjal
नागदेवताको मणीलाई दर्शन गरी एक सेयर गर्नुहोस ..ॐ !
July 3, 2021 304
Sapana Sanjal : सामान्यतया सर्प देखेपछि मानिसहरु डराउँछन्।तर,हालै भारतमा एक अनौठो खालको सर्प देखिएपछि हेर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ।भारतको कर्नाट कस्थित होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प फेला परेको हो । जसको टाउँकोमा सुनौलो रंगको प्रकाश चम्किन्थ्यो ।सर्पको शीʼरमा प्रकाश चम्किएपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड लागेको थियो ।समाचारका अनुसार होलमाकी गाउँका एक स्थानीयको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। त्यो देखेर मानिसहरु त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुले कोब्रा जातको अनौठो सर्प देखे । तर, सर्प विशेषज्ञका अनुसार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभएको बताʼएका छन् ।
बाङ्गेमुढास्थित ओलाछी टोलमा रहेको गणेश मन्दिर पुन निमार्णका क्रममा पुरानो ढुङ्गाको गणेशको मूर्ति फेला परेको छ ।मन्दिर पूनर्निर्माणका क्रममा पित्तलको गणेशको मुर्ति उप्काउंदा पछाडि ढुगांको करिब पाँच सय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेको हो ।असावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए । हजुरबुबा तुलसी नारायण माननधरले २०२२ साल तिर न्यास पूजा गरि ढुगांको पुरानो मुर्ति माथि पितलको गणेशको मुर्ति स्थापना गरेको उहांको भनाइ छ । फेला परेको गणेशको मुर्ति दुई हाते हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ ।
स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । द्द।सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ ।
स्त्री सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।मंगलबारः पुरुष : मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ ।
स्त्री : ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडासमेत हुन्छन् बुधबारः पुरुष : बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । स्त्री : बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।
विहीबार : पुरुष विहीबार जन्मिने पुरुष विद्वान र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार चढाव र समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुसी हुन्छन् । विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । स्त्री जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
शुक्रबार : पुरुष : शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्दीमान र मृदुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो ।यिनीहरु सहनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौखिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट हुन्छ । स्त्री : कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
शनिबार स् पुरुष जुन ब्यक्तिको जन्म शनिबार हुन्छ उनीहरु कृषि ब्यावार वा प्रविधीको क्षेत्रमा रुची राख्छन् । यिनीहरुका लागि बाल्यकाल कष्टपूर्ण हुन सक्छ । भाइ बहिनी वा दाइ दिदीबठ्ठ सन्तुष्टी मिल्दैन । यिनीहरुलाई २० र २५ वा ४५ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री : शनिबार जन्मिने स्त्री दुबली पातली हुन्छन् तर अग्ला । सामान्यतया यस्ता स्त्री कालो वर्णका हुन्छन यस्ता महिला अरुका कुरा काट्ने पनि हुन् सक्छन् ।
सामान्यतया सर्प देखेपछि मानिसहरु डराउँछन्।तर,हालै भारतमा एक अनौठो खालको सर्प देखिएपछि हेर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ।भारतको कर्नाट कस्थित होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प फेला परेको हो । जसको टाउँकोमा सुनौलो रंगको प्रकाश चम्किन्थ्यो ।सर्पको शीʼरमा प्रकाश चम्किएपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड लागेको थियो ।समाचारका अनुसार होलमाकी गाउँका एक स्थानीयको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। त्यो देखेर मानिसहरु त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुले कोब्रा जातको अनौठो सर्प देखे । तर, सर्प विशेषज्ञका अनुसार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभएको बताʼएका छन् ।
Prevशनिबार गर्नुहोस् यी काम, मिल्नेछ हनुमानको कृपा, बन्नेछन् बिग्रिएका काम
Nextढाडमा यो के भयो यस्तो ,मे रुदण्ड नै बा ङ्गो,प शु सरह यसरी हिड्छन् ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो )
कोरोना संक्रमित ह्वातै बढेपछि देशव्यापी लकडाउनको बिषयमा बोले प्रधानमन्त्री
जब एक भिकारी आफ्नो बैंकमा चेक साट्न पुग्दा बैंकमा नै पुगेन पैसा, यति धेरै रकम भेटिएपछि बैंकका कर्मचारीनै चकित परे
विमान दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
घर भत्किँदा एकै घरका तीन जनाको मृत्यु, अन्य ४ छोरीहरू भने भाग्यले बाँचे
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1138)
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (991)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (843)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (792)
रामराम के भयो यी साना बाबुलाई ,हेर्दाहेर्दै यस्तो भयो ,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (786)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (778)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (725)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ ! (716)
प्रियंका कार्की गर्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो एकैदिनमा ५ लाख बढीले हेरे , हेर्नुहोस भिडियो – (712)
ललितपुरबाट पोखरा बोलाएर नुभिवलाइ आफ्नै साथीले…. (709)
पारस शाहले भने, ‘हेलमेट लगाउनु नलगाउनु मेरो मनको इच्छा हो’
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात
भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई भूटान र माल्दिभ्ससँग तुलना गर्दै यस्तो भनेपछि…
एमसीसी अनुमोदनै नभई नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहण कसरी भयो ?
प्रहरीमा जागिर खान यस्तोसम्म गर्दारहेछन ! ४ जना पक्राउ परेपछी खुल्यो पोल